Saturday May 14, 2016 - 12:14:59 in Wararka by Super Admin
Magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya waxaa lagusoo gaba gabeeyay shir loogu magac daray wadahadalka diimaha oo uu soo qaban qaabiyay Markaz laga leeyahay Wadanka Sacuudiga.
Ururka Midowga Afrika ayaa xaruntiisa Itoobiya ku martigeliyay kulankan oo ay ka qeyb qaadanayeen wadaada xumayaal ka socda inta badan wadamada islaamka ee dhaca qaaradda Afrika.
Wadaada xumayaal iyo baadariyaal madasha kulanka xaadir ku ahaa ayaa sheegay in wax ay ugu yeereen wadahadalka diimaha uu meesha ka saari karo jamaacaadka Jihaadk oo ay ku sifeeyeen Argagaxiso.
Mid kamida baadariyada Kaniisadda Ortadakiska Itoobiya oo khudbad ka jeediyay shirka sheydaaniga ah ayaa sheegay in dadka Nasaarada ah ay qaati ka taaganyihiin ducaadda muslimiinta ee sida ay tahay ufaafinaya diinta islaamka isagoona wadaada xumayaasha dawaaqiidda ku dacweeyay ducaadda muslimiinta xaqqa lajahra oo uu ku sifeeyay sharwadayaal fatwooday in ladilo Yahuudda iyo Nasaarada.
Shirkan ay Itoobiya martigelisay waxaa dhaqaale badan ku bixiyay Markaza wadahadalka diimaha ee Boqor Cabdalle oo uu aas-aasay hoggaamiyihii sacuudiga ee halaagsamay Cabdalla Bin C/Caziiz.
Nin lagu magacaabo Max’med abuu Namar oo ah lataliyaha guud ee Markza Boqor Cabdalla ee wadahadalka diimaha ayaa khudbad uu ka jeediyay madasha ku sheegay in ay qodoqonimo iyaga ku tahay in saaxaadka loo baneeyo jamaacaadka jihaadiga iyo wadaadada muslimiinta ee xaqqa lajahra oo isagu uu u gu yeeray xagjirayaal jihaadiyiin ah.
Sarkaal ka socday dowladda Federaalka soomaaliya oo isna khudbad ka jeediyay madasha shirka Addis Ababa ayaa ku cataabay in wadaada xumayaasha carabta iyo baadariyada adduunka ay ka gaabiyeen ka hortagga xarakada shabaabul mujaahidiin isagoona codsaday in labadiyo kulamada caynkaan oo kale ah ee lagu diidanyahay jihaadka hubeysan iyo faafinta dacwada islaamka.
Max’med Abuu Namar ayaa gaba gabadiid kulanka ka sheegay in Markazka waxa loogu yeero wadahadalka diimaha uu leeyahay awood dhaqaale,mid melleter,mid dhanka thaqaafada ah iyo mid warbaahineed oo baacsanaysa jamaacaadka jihaadiga ah iyo culimada taageerta isagoona kasoo qeyb galayaasha niyadda ugu dajiyay in shirarka nuucaan oo kale ah ay afrika kasii socan doonaan.
allaah ayaa qur’aankiisa kariimka ku sheegay in aysan jirin diin aan diinta islaamka aheyn,waxaana hadaan naareed kusii dhacaya kuwa mashaariicda nuucaan oo kale ah wada oo adduun iyo aakhiro khasaaray.
ciddii diin aan aheyn diinta islaamka diin ka dhigata waxay ku dhacday gaalnimo cad haba yaraatee wax wadahadal ah oo diinta islaamka ay lagashay diimo kale kitaabka iyo sunnada laguma sheegin.
Hoggaamiyihii Sacuudiga Cabdalla Bin C/Caziiz ayaa 12 sanadood ka hor magaalada Madrid ee wadanka Spain ka furay shirka wadahadalka waxa loogu yeero diimaha.